Snacks & Pizzerias | Tsidiho i Hultsfred
Pizza sy sakafo haingana
Tonga lafatra amin'ny toe-javatra rehetra
Ny pizza dia manana toerana manokana ao am-pontsika ary ny sakafo tsara dia vao haingana no niditra tao amin'ny sakafo hafa fa tsy ny Italiana fotsiny. Ao amin'ity torolàlana ity, manangona pizzeria madio sy trano fisakafoanana ao amin'ny kaominina Hultsfred izahay izay manolotra pizza ho ampahany amin'ny sakafo.
Charlie Pizzeria ao Mörlunda dia manolotra pizza, burger, barbecue ary salady. "Mörlunda pizza" ihany no hita ao amin'ny Charlie Pizzeria
Miaraka amin'ny Vetlandavägen any Målilla no Bandy Grill. Eto ianao dia afaka misafidy amin'ny burger, saosisy, meatballs, kebab, akoho. Mandritra ny vanin-taona mafana dia misy koa terrasse kely ety ivelany.
Trano fisakafoanana sy Pizzeria Emåbaren
Emåbaren dia trano fisakafoanana sy pizzeria. Ny fandrahoan-tsakafo an-trano dia aroso eto mandritra ny sakafo antoandro 1100-1400. Ho solon'ny sakafo ankehitriny, dia misy pizza, salady na kebab.
Ny pizzeria dia eo afovoany ao Virserum. Eto ianao dia misakafo tsara amin'ny toerana mahafinaritra. Ao amin'ny Restaurang Betjänten dia mahazo serivisy sy kalitao tsara foana ianao. Ianao dia afaka
Pizzeria dia miorina afovoany ao Hultsfred. Ankoatra ny pizza, ny kebab sy ny salady dia eo amin'ny menio ihany koa. Amin'ny fahavaratra dia misy koa terrasse ivelany. Misy 24
Pizzeria any Hultsfred izay eo akaikin'i Willys ihany. Pizza, kebab, gyros, salady ary burger no aroso eto. Manolotra pizza tena tsara izy, mpiasa mahay
Milano dia pizzeria miaraka amin'ny fitaterana azy sy ny fotoana hisakafoanana eo an-toerana. Pizza, kebab, falafel, burger ary salady isan-karazany no aroso eto.